Warar dheeri ah oo laga helay sababta loo garaacay Xildhibaanad Faadumo Cabdi – Somali Top News
Warar dheeri ah oo laga helay sababta loo garaacay Xildhibaanad Faadumo Cabdi
Xildhibaanad Faadumo Geeddi oo ka mid ah Baarlamaanka dalka Kenya ayaa maanta waxaa feeray Xildhibaan Rashiid Amiin oo ay ka soo wada jeedaan Magaalada Wajeer.
Xildhibaanadda ayaa sawirro laga qaaday waxaa ay muujinayaan dhiig ka baxaya afkeeda, iyada oo ka hadleysay Xildhibaanka feeray ayaa waxaa ay tiri: “ wuxuu igu tilmaamay Istubid, iyo micno la’aan, waa uu I garaacay, waan naxay, waan aamini waayay, wuu igu soo laabtay oo haddana wuu I garaacay”.
Waxa sidaas u galay waa Xildhibaan Rashiid Amiin oo ah Xildhibaanka Bariga Wajeer, markii arrintan wax laga weydiiyay ma qiranin mana dafirin.
Xildhibaannada iyo waardiyayaashii kale ee ku sugnaa goobta Gawaarida la dhigto ee Baarlamaanka ayaa sheegay in Rashiid Amiin uu ka careysnaa sababta Faadumo oo ka mid ah Guddiga Maaliyadda aysan bulshada uu matalo ee Bariga Wajeer miisaaniyad u siinin markii ay booqaneysay maaddaama ay siisay gobollada kale.
Intaas kaddib Rashiid ayaa ka carooday hadalkaas caay iyo feerna kala daalay Xildhibaannad Faadumo Geeddi oo ah Haweeeneyda Baarlaamka ku matasha Haweenka Wajeer.
Wanga, oo ah qof la socday ayaa sheegay in labada Xildhibaan ay af Soomaali ku wadahadlayeen isagana uusan waxbadan ka fahmeyn,”wax yar kaddib waxaan arkay Rashiid oo Faadumo ka feeraya Xabadka, iyada wey ooyeeysay, dhiigna waa ka socday” ayuu yiri.
Waxaa la geeyay Isbitaalka Karen Hospital, halkaas oo gar gaar deg deg ah loogu sameeyay kaddibna waxaa ay iska xaadirisay saldhigga Booliska halkaas oo looga qoray O-B-ga.
Wargeyska The Star ayaa la xiriiray Rashiid Amiin,waxaana uu ku soo gaabsaday “waa xan, wax kastana waxaan uga jawaabayaa Booliska”.
← Oil tankers hit in fresh ‘torpedo attack’ in Gulf of Oman amid Iran tensions
Dowladda Soomaaliya maxaa ugu qorsheysan cudurka Ebola oo si xowli ah ku faafaya? →
Madaxweyne Farmaajo oo Madaxtooyada ku qaabilay Wasiirka Maaliyadda Itoobiya
June 29, 2019 Somali Top News 0